စမတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စမတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
စမတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး စမတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuတွင်or ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အားလုံး ပေါင်းစုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ (lတွင်ear ရွေ့လျားမှု အခင်အရှင်s)such အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင်, ဂိတ် အခင်အရှင်, နှင့် etc.အဆိုပါ အနားကွပ် တွေ့ဆုံ ISO ကို 5210 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ stနှင့်ard. အဆိုပါ AOX-M စီးရီး စမတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuတွင်or ဖြစ် IP67 ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် နိုင် ဖြစ် တွင်stအားလုံးed တွင် မည်သည့် angle.AOX တွင်taches greတွင် အရေးပါပုံ သို့ ကုန်ပစ္စည်း ဒီဇိုင်း, နှင့် အဆိုပါ ပုံစံ အသင်းအဖွဲ့ hအဖြစ် အားကြီးသော စွမ်းအား ၏ ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ နှင့် တွင်novတွင်ion. AOX hအဖြစ် ပြည့်စုံသော ပညာတတ် အိမ်ခြံမြေ အခွင့်အရေး နှင့် mမည်သည့် စက်မှုလက်မှု pတွင်ents. ကျွန်တော်တို့ excpect သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် အဆိုပါ အနား အနာဂတ်။
torque Range: 40 - 1000 nm တိုက်ရိုက် Output
မြန်နှုန်း: 34 35 45 67 70 90 (rpm ပါ)
အလုပ်အဖွဲ့စနစ်: တွင်-off အမျိုးအစား: S2 15 မိ, ထက်ပိုမ 600 ကြိမ်တစ်နာရီလျှင်စတင်။
ပြောင်းလဲပစ်အမျိုးအစား: S4 ကို 50%, တစ်နာရီကို 600 အစပျိုးခြင်းမှတက်
phase sequence ကို Self-ဆုံးမခြင်း
AOX-M စီးရီးစမတ်ပေါင်းစုံနှစ်ချက်တံဆိပ်ခတ်သီးခြားဝင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်သည့်လျှပ်စစ် actuator, turn on-site ကိုဝါယာကြိုးလုပ်ဖွင့်သေတ္တာအဖုံးလျှင်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသမာဓိရှိအာမခံ၏ terminal box ကို။
အနီအောက်ရောင်ခြည် setting ကိုအတူ 2. နောက်ဆုံးရ Non-ထိုးဖောက်ဒီဇိုင်း
အဆိုပါ AOX-M စီးရီးစမတ်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn ၏ setting ကိုနှင့်ရောဂါရှာဖွေအိမ်ရာဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲ, display screen သို့ပိတျထားသောမှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ setting ကို tools များနှင့် display ကိုမျက်နှာပြင်အကြားတရားဝင်အကွာအဝေး 1-1.5m အကြောင်းပါ။
ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှု switches များနှင့်သော့ခတ်အမျိုးအစား selector ဒေသခံ / ရပ်တန့် / ဝေးလံခေါင်ဖျားသို့ကူးပြောင်းရန်အရှင် actuator ၏အတွင်းပိုင်းပိတျထားသော damp အထောက်အထားအာမခံ, သံလိုက်ကျူပင်ကိုအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောသံလိုက် switches များဖြစ်ကြသည်။
R & D Capabillity
1997 ခုနှစ်မှစ. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်အပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူစတာတွေက high-tech ခွက်ကောလိပ်များနှင့်သုတေသနဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်နှင့် AOX ၏မူပိုင် R & D ကိုအသင်းကိုလေးစားမှုလုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်နဲ့ multi လျှပ်စစ် actuator လှည့်မတ်အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့် AOX-M စီးရီးဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
မေး: AOX-M စီးရီးစမတ်ပေါင်းစုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အဘယ်အရာလျှပ်စစ် actuator turn ၏နမူနာအကြောင်း?
မေး: သင်မည်သို့customerâ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တခုအမြန် respnse စေသလဲ?
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်, Skype နှင့်ဖုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကို reply ပါလိမ့်မယ်။
ဖြေကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့အမေရိကား, ဂျပန်, ကနေဒါ, ဗီယက်နမ်, တူရကီ, ထိုင်း, ရုရှား, ဗြိတိန်, အဖြစ်နိုင်ငံအများအပြားအတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်ဖောက်သည်များတင်ပို့အများကြီးရှိသည်။
hot Tags:: စမတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်